Namonoana an’i Danil Radjan: tsy voahaja ny fiarovana ny zon’ny voarohirohy | NewsMada
Namonoana an’i Danil Radjan: tsy voahaja ny fiarovana ny zon’ny voarohirohy
Maneho hevitra ny mpisolovava sy ny fianakavian’ireo voarohirohy, tazomina am-ponja vonjimaika, amin’ny namonoana an’i Danil Radjan. Melohin’izy ireo ny endrika fitsarana amin’ny alalan’ny famoaham-baovao sy ny fandrahonana mahazo azy ireo. Ao anatin’izany ny fanamelohana tsy voamarina ireo voarohirohy, izay tazonina am-ponja vonjimaika. Ho an’ny mpisolovava sy ireo fianakaviana, efa mandeha ny asan’ny fitsarana, saingy hita fa misy ny famoaham-baovao ataon’ny mpisolovava ny mpitory, raisina ho toy ny manameloka sahady ireo voarohirohy.
Takin’ny mpisolovava sy ny fianakavian’ny voarohirohy ny hanajana ny mbola tsy maha meloka sy ny hanajana ny zon’ireo voarohirohy. Melohin’izy ireo ny fitsarana amin’ny alalan’ny famoaham-baovao, izay mety hiantraika any amin’ny fijery sy ny fisainan’ny daholobe ary ny mpitsara. Matoky tanteraka ny fitsarana anefa izy ireo.
Fandrahonana ho faty- Fitiliana ADN
Milaza koa ny fianakavian’ny voarohirohy amin’ny alalan’ny mpisolovavany, ny Maître Fano fa nahazo fandrahonana ho faty matetika avy any amin’ny olon-tsy fantatra izy ireo. Voakasik’izany daholo ny voarohirohy amin’ity raharaha ity sy ny manodidina azy ireo. Na izany aza, ankasitrahan’izy ireo ny fiaraha-miasa amin’ny fitsarana frantsay, nantsoin’ny fianakavian’i Danil Radjan, manampy amin’ny fanadihadiana lalina, toy ny fanaovana ny fitiliana AND, mba hamantarana ny tena meloka.
Tsiahivina fa hita tao ambanin’ny trano, tao amin’ny trano La City, ny fatin’i Danil Radjan, ny 19 septambra teo.